Lionel Messi Oo Guul Muhiim Ah Ku Hogaamiyay Barcelona, Blaugrana Oo 7 Dhibcood Ku Qabatay Hogaanka La Liga Iyo Fursad Qasaarintii Badnayd Ee Ay Barca Samaysay. - GOOL24.NET
Lionel Messi Oo Guul Muhiim Ah Ku Hogaamiyay Barcelona, Blaugrana Oo 7 Dhibcood Ku Qabatay Hogaanka La Liga Iyo Fursad Qasaarintii Badnayd Ee Ay Barca Samaysay.
Barcelona ayaa tubta guusha ku soo laabtay kadib markii ay guul cidhiidhi ah Camp Nou kaga gaadhay kooxda Real Valladollid iyada oo Lionel Messi uu kulankan ku go’aamiyay gool rekoodhe ahaa oo uu dhaliyay dhamaadkii qaybtii hore laakiin Messi ayaa rekoodhe kale qasaariyay qaybtii labaad ee ciyaartan.
Lionel Messi ayaa fursad lumin aan looga baran kulankan ka sameeyay si la mid ah ciyaartoyda kale ee kooxdiisa oo uu Luis Suarez ka mid yahay laakiin kooxda Valverde ayaa saddexda dhibcood ka heshay Valladolid iyada oo goolhayihii hore ee Barcelona ee Jordi Masip uu bandhig layaableh kula soo laabtay Camp Nou.
Kaydka: Ivan Rakitic, Clement Lenket, Luis Suarez, Inaki Pena, Malcom, Coutinho, Nelson Semedo.
Kaydka: Duje Cop, Yoel Rodriguez, Borja Fernandez, Keko, Stiven Piaza, Toni Villa, Javi Moyano.
Kooxda Valladolid ayaa iska caabin xoogan kala hortimid Barcelona iyada kooxda Valverde qaybtii hore soo bandhigtay mid ka mid ah qaab ciyaareedkeedii xili ciyaareedkan ugu xumaa waxaana shaxda uu Valverde kulankan u soo doortay ku adkaatay in ay kubbada haysan karaan ama ay xataa si fiican iskugu dhiibi karaan.
Qaybtii hore ee ciyaarta ayaa inta badan ahayd mid gool la’aan ah isla markaana aan xamaasad badan lahayn balse waxa ugu badan ee la arkayay ayaa ahayd kubbada badan ee ay Lionel Messi iyo asxaabtiisa Barcelona garoonka si sida sahlan ugu luminayeen.
Daqiiqadii 41 aad Lionel Messi ayaa ugu danbayn u muuday in uu dhalinayo goolka furitaanka laakiin kubbada uu lugta bidix ku danbeeyay ayuu difaacu ka daboolay wuxuuna helay fursad labaad oo uu lugta midig darbo kale ugu tuuro laakiin kubbada ayaa wax yar birta u martay.
Daqiiqadii 42 aad Xidiga kooxda Valladolid ayaa qalad rekoodhe sabab u noqday ku galay Gerard Pique oo haystay fursad uu kubbad ugu darbayn lahaa goolka wuxuuna isla markiiba garsooruhu tilmaamay in ay rekoodhe tahay.
Daqiiqadii 43 aad Lionel Messi ayaa kubbada qaatay wuxuuna goolka furitaanka ku dhaliyay rekoodhaha kooxdiisa lagu abaal mariyay isaga oo darbadiisa ku garaacay goolhayihii hore ee Barcelona ee Masip inkasta oo uu si fiican kubbada u raacday, waxayna ciyaartu noqotay 1-0 ay Barcelona hogaanka ciyaarta kula wareegtay.
Lionel Messi ayaa dhaliyay goolkiisii 22 aad ee La Liga iyo goolkiisii 30 aad ee tartamada oo dhan wuxuuna gaadhay rekoodh gool dhalin oo heer kale ah kadib markii loo diwaan galiyay in uu 11 kii xili ciyaareed ee ugu danbeeyay uu mid kastaba soo dhaliyay 30 gool ama ka badan.
Qaybtii hore ee ciyaarta ayay Barcelona ahayd mid aan soo bandhigin wax u dhaw qaab ciyaareedkii looga bartay laakiin goolka uu Lionel Messi dhaliyay ayay waqtigii nashada hogaanka ciyaarta ku hayeen.
Markii layskugu soo laabtay qaybtii labaad ee ciyaarta isla daqiiqadii 50 aad Lionel Messi ayaa helay fursad gool dhalineed oo cadaan ah laakiin goolhaye Masip ayaa sameeyay gool badbaadin layaableh si uu Messi uga beeniyo goolkiisa labaad ee uu dhalin lahaa!.
Daqiiqadii 60 aad Valverde ayaa ciyaarta ka saaray Boateng oo fursad banaan ah kula soo baxay goolhayaha Valladollid wuxuuna ciyaarta soo galiyay Luis Suarez waxayna Barca bilawday in ay raadiso goolka labaad si ay iska caabinta Valladolid u burburiso.
Daqiiqadii 66 aad Lionel Messi ayaa bilaabay in uu u dabaal dego wax u muuqday goolkiisa labaad laakiin ma rumaysan kartid gool badbaadinta kale ee uu sameeyay Masip kaas oo darbo uu Messi meel gaaban kaga tuuray si cajiib ah isku dhaafiyay.
Daqiiqadii 70 aad Valverde ayaa ciyaarta soo galiyay Philippe Coutinho wuxuuna saaray Ousmane Dembele oo aan la soo laaban qaab ciyaareedkii uu dhaawacu ku soo gaadhay inkasta oo Valverde uu qalad ku lahaa in aanu ka ciyaarisiin booskiisa ugu fiican ee garabka midig ee weerarka.
Daqiiqadii 76 aad Valverde ayaa ka fikiray sidii uu natiijada ciyaarta ku ilaashan lahaa markii ay kooxdiisu goolka labaad keensan kari wayday wuxuuna ciyaarta soo galiyay Ivan Rakatic isaga oo saaray Carles Aleñà.
Daqiiqadii 84 aad rekoodhe! Luis suarez iyo Coutinho ayaa kubbad cajiib ah isla soo ciyaaray laakiin kubadii ugu danbaysay ee uu Coutinho helayay waxaa qalad ugu galay Olivas taas oo garsooraha ku qasabtay in uu rekoodhihii labaad ee ciyaarta uu tilmaamay.
Daqiiqadii 85 aad Lionel Messi ayaa qasaariyay rekoodhaha labaad ee uu kooxdiisa u tuuray waxaana si cajiib ah uga badbaadiyay goolhaye Jordi Masip oo kulan layaableh Camp Nou ugu soo laabtay laakiin Messi darbo madax ah ku dhalin lahaa goolka labaad laakiin markale Jordi Masip ayaa markiiba soo kacay wuxuuna dirqi ku soo qabtay kubbada goolkiisa sii galaysay!
Barcelona ayaa fursad lumin badan samaysay dhamaadkii ciyaarta iyada oo Luis Suarez iyo Lionel Messi ay heleen fursado ay dhawr gool ku dhalin gaadheen laakiin Valladolid ayaa wali qalbiga ku haysay in ay hal fursad ku ciqaabto Barcelona.
Daqiiqadii 92 aad Lionel Messi iyo Luis Suarez ayaa kubbad goolka labaad loogu sii sare kacay la soo galay xerada ganaaxa Valladollid laakiin ma rumaysan kartid sida ayna fursadani gool u noqon waxaana markale si aan la rumaysan karin goolkan u beeniyay Masip!.
Ugu danbayn ciyaarta ayaa ku dhamaatay 1-0 ay Barcelona guul cidhiidhi ah kaga gaadhay kooxda Valladollid waxayna Barcelona sii dheeraysatay hogaanka La Liga ka hor kulanka El Clasico-da ee ay Bernabeu ku booqan doonto Real Madrid balse waxay marka hore la ciyaari doonta kooxda Lyon ee kulanka Champions league.